आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै थाकसको निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमारलाई हटाइयो – Tharuwan.com
January 8, 2015 January 10, 2015 admin
काठमाडौं- थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)का निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीलाई संस्थाको कुनै पदमा नरहनेगरी मुक्त गरिएको छ। बुधबार बसेको सभाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले चौधरीलाई संस्थाबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। थाकसको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको हो।
‘अघिल्लो कार्यसमितिले अहिलेसम्म हिसाब किताब बुझाएको छैन। हामीले अनुसन्धान गर्दा साढे तीन लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको बुझियो। लिखित, मौखिक खबर गर्दासमेत नटेरेपछि संस्थाबाट हटाउने निर्णय गर्नुपरेको हो,’ सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले भने।
चन्द्रकुमार चौधरीले आजीवन सदस्यस्ताबाट उठेको रकमसमेत हिनामिना गरेको बुझिएको छ। केन्द्रीय सदस्य राजकुमार लेखीका अनुसार सप्तरीका ३८ जनाबाट उठाइएको आजीवन सदस्यताको रकम अध्यक्षले हिनामिना गरेको बुझिएको छ। उनले दाङ, बारा, पर्सा र काठमाडौंलगायतका ठाउँबाट उठाएको आजीवन दस्यता शुल्कसमेत हिनामिना गरेको बताए। सभाले चन्द्रकुमारलाई पाँच वटा अभियोग लगाइएको लेखीले बताए।
लेखीले निवर्तमान अध्यक्षले गरेको आर्थिक हिनामिनाबारे भर्खरै पोल खुल्दै आएको बताए। २४ जिल्लामा चेतनामूलक कार्यक्रमका लागि जनही ७ हजार दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसमा सात जिल्लालाई पैसा नदिएको र एकैदिन चार-पाँच जिल्लामा ५-६ जनाका बीच आधा घन्टा कार्यक्रम गरिएको लेखीले बताए। त्यहाँको रकम पनि हिनामिना देखिएको लेखीले बताए।
थाकसको विद्यानमा १५ दिनभित्र हिसाब किताब बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। हिसाबकिताब नबुझाइँदा संस्था नवीकरण हुन नसकेको लेखीले बताए।
झुम्की अर्थात् कमलरी बन्दै पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशी
6 thoughts on “आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै थाकसको निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकुमारलाई हटाइयो”
Aatmalochana gare, paap dhuna gaya janu pardaina
चन्द्र कुमार चौधरी भ्रष्टाचारमा मुछिएको बारे प्रसंग। अहिले सरकार कांग्रेस र एमालेको छ। माओबादी र संयुक्त मधेसी मोर्चा लगायत ३० पहिचानबादी दलहरुले सरकारले अटेर गरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीको बाबजुद चन्द्र कुमारलाई था.क.स. मा आर्थिक हिनामिना गरेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। अहिलेका वर्तमान थाकसका अध्यक्ष धनिराम चौधरी कांग्रेस द्वारा संचालित छन् भने थाकसका सल्लाहकार राजकुमार लेखी एमालेको कठपुतली भएर काम गर्दैछन्। हुनत राष्ट्रिय नागरिक पार्टी उसको नाम मात्रैको पार्टी हो। चन्द्र कुमार हाल माओवादीमा छन्। त्यसैले यो आरोप लगाएका हुन्। यदि चन्द्र कुमार दोषी हुन् भने छानबिन हुनु जरुरी छ। ऊ सजायको भागिदार पनि छ। मानौ उनी भ्रष्टाचार गर्यो रे। उसको कार्यकालमा थाकसका महासचिव, सचिव,कोषाध्यक्ष, सदस्यहरु तथा सल्लाहकारहरु को को थिए त? ती सबै जना भ्रष्टाचारी हुन्। एकजनाले कसरि भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्? त्यसैले चन्द्र कुमारलाई मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप लगाउदैमा र पद्च्युत गर्दैमा तत्कालीन थाकसका पधाधिकारीहरु कोहि पनि चोखो हुन सक्दैनन्। सबैलाई निलम्बन गरिनु पर्छ। उनीहरु सबैमाथि मु्द्दा दायर गरेर कारबाही कानुनि तवरले अगाडि बढाउनु पर्छ।
You are right shankar zee
अब था.क.स.थारु संस्था रहेन यो त् केवल लेखी अध्यक्ष रहेको नागरिक पार्टी को अर्को नाम हो , पर्यायबाची नाम ! आज पहिचानबादीहरुको आवाज बुलन्द भएको बेला , एक ढिक्का भएको बेला उ एकल काटे भएर , बहुपहिचनको थोत्रो ढोल बजैरहेकोछ ! असपष्ट माग “पहाडमा जतिकै संख्याँमा तराइमा पनि प्रदेश चाहियो रे “जस्ता माग ! सुनसरी , मोरंग , कैलाली कंचनपुर जिल्ला जस्ता थारु बहुलियता आदिवासी भएका जिल्ला जहाँ थारुहरुको आवाज बुलन्द हुनुपर्ने हो, वहा चुप लाग्नु र बाहुनबादी पार्टी को नारा बहुपहिचान बोकेर हिदनुनै,था. क.स
लेखी र धनीराम मार्फत एमाले कांग्रेसको भात्रीसंगठन हो भन्ने बुझिन्छ !
I’m agreed with Shankarji.
बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउदैन अर्काको पनि सम्पन्न हुन दिदैन । अरुले नराम्रो काम गर्‍यो भन्दैमा बद्नाम गर्दै हिंड्नु बहादुरी हैन । बिग्रिन लागेकोलाई सुधारनु बहादुरी हो। त्यसकारण के गर्दा भविस्यमा सही गतिमा अघी बढ्न सकिन्छ । तेस्तर्फ सोच्नु र लागि पर्नु जरुरी छ। हजारौ , लाखौं मनिसलाई आफुतिर आकर्शित गरेर भ्रस्टाचार गरी धोका दिनु पनि एउटा कला हो। सक्छौ भने गरेर देखाउ । याद राखौ यो दुनियाँमा दुई वटा तरिका बाट नाम कमाउन सकिन्छ । प्रथम , साह्रै राम्रो काम गरेर नाम कमाउनु ,र दोस्रो , साह्रै खराब काम गरेर बद्नाम हुनु । राम र रावन को कथा रामायाण बाट पनि एही शिक्षा लिन सकिन्छ ।
एस्बाट पनि पुगेन भने याद गर्नु ” इमान्दारी से आदमी अमर होता है लेकिन अमिर (धनी )नही हो सक्ता ।